HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaKhadkii Tareenka ee Bursa ma ahan mid dhakhso badan 'Heerar Sare'
09 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY 0
Wadada tareenka ee bursa ma aha heer sare
Night ken Intii aan dhexdeyneynay shabakada 'TCDD', waxaan ku aragnay nafteena bogga Barnaamijka Maalgashiga ee 2019. Intaa waxaa dheer, waan la yaabnay markaan aragnay macluumaadka ku yaal bogga.
Waxa aan aragno waa tan:
Agaasinka Guud ee TCDD 1 Bishii Agoosto 2019 wuxuu sameeyay dib-u-fiirinta shanaad ee barnaamijka maalgashiga.
Si kale haddii loo dhigo, magaca Bandırma-Bursa-Yenişehir-Cusmaan, oo lagu soo daray barnaamijka sidii tareen xawaare sare ku socday illaa Agoosto, ayaa loo beddelay Tareenka Sare ee dib-u-eegista leh.
Barnaamijka maalgashiga Tcdd
In liiska ...
Qadka Ankara-Istanbul, oo wali uu socdo oo uu ka kooban yahay Kayaş-Ankara-Sincan, Sincan-Esenkent, Esenkent-Eskişehir, Eskişehir Station Crossing, Eskişehir-İnönü, İnönü-Vezirhan, Vezirhan-Köseköy, xawaaraha ugu sarreeya waa, dabiiciga ugu sarreeya, Köseköy-ga - xawaaraha ugu sareeya dusha sare.
Khadadka Ankara-Sivas, Ankara-Polatli-Afyon-Usak-Manisa-Izmir iyo Yerkoy-Kayseri ayaa ku qoran qeybta sare ee Tareenka Xawaaraha Sare.
Si kastaba ha ahaatee Buna
Waxaan weydiinay kuwa garanaya meheraddan waxa ay la micno tahay in la beddelo magaca khadka khadka 'Joeleli-Bursa' ee qaybta tareenka Xawaaraha Sare sida barnaamijka Tareenka Sare ee barnaamijka maalgashiga.
Mar labaad, qiimaha sare ee dhismaha tareenka xawaaraha sare ayaa u muuqday. Waxay yiraahdeen:
Yolcu Tareenka rakaabka iyo tareenka xamuulka labadaba waxay ku shaqeyn doonaan khadka Bursa. Sidaa darteed, meeshani waxay noqdeen fasalka caadiga ah ee safka. "
Waxaan ula jeedaa ...
Khadkan wuxuu ka soo baxay qeybta tareenka xawaaraha sare ee qaaliga ah waxaana lagu soo daray qeybta labaad, qadka caadiga ah halkaasoo khadadka tareenka xamuulka qaada ay wada shaqeeyaan.
Xaaladdan oo kale ...
Mashruuca Tareenka Sare ee heerkiisu yahay baaxadda caadiga ah ee la saadaalinayo maalinta xamuulka iyo rarka xamuulka ee habeenka, gaari tareenka xawaare sare leh ayaa lagu shaqeyn karaa iyo sidoo kale wade rakaab caadi ah.
TCDD waxay sameyn doontaa doorashada iyadoo lagu saleynayo shuruudaha maalinta iyo ku filnaashada heerarka tareenka xawaare sare ku socda.
Waxaa jira rajo, dabcan. Gaaritaanka rajadaas waxay kuxirantahay go'aanka rabitaanka siyaasadeed.
Bilyan qoondeyn ah oo loo qoondeeyay 3 bilyan oo doolar
1 ee Agaasinka Guud ee TCDD Marka loo eego barnaamijka maalgashiga 2019 ee dib loo eegay bishii Agoosto, Mashruuca Tareenka ee Band Highrma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli wuxuu ka kooban yahay xariiqa kiloomitir 180.
Barnaamijka waxaa ...
3, oo ah sinaanta oo dhan, ayaa la saadaaliyay inay ku kacayso TL milyan. Of this, 1 billion 940 million 508 kun oo rodol 2018, 252 million 010 kun oo rodol ayaa lagu kharash gareeyay 2019, iyo wadarta kharashaadka ayaa gaarey 2 bilyan 192 milyan 518 kun oo rodol.
Khadka Yenişehir-Osmaneli ee mar labaad la dhisi doono iyo khadka Bursa-Yenişehir waxaa lagu shaacin doonaa qandaraaska superstructure-electromechanical.
Jawaabta ugu dhakhsaha badan: Joojinta qandaraaska tareenka mar labaad bisha soo socota
Qaybahaan… Waxaan ku dhawaaqnay Isniinta iyo shalay in qandaraaska 3 bilyan ee 2018 milyan ginni ee 2 Abriil 520 ee dhammaan khadka Yenişehir-Osmaneli la kansalay la shaqeynta superstructure iyo electromechanical ee qadka Bursa-Yenişehir.
Dhab ahaantii ...
Bishii Juun 2018, hindisada ayaa lagu dhawaaqay, iyadoo ay ugu wacan tahay duruufaha dhaqaale ee adduunka awgood, qiimaha ayaa durbadiiba dhaaftay 4 bilyan ginni ka hor intaysan bilaaban.
Ma fududa in la dulqaado kororka noocan oo kale ah. Sidaa darteed, qandaraasluhu xitaa wuu keeni kari waayey goobta, howshu waxay keentay joojinta hindisada.
Wararka ku saabsan waxqabadka degdegga ah waxay ka yimaadeen Serbia.
Kuxigeenka AK Party Bursa Dr. Recep Tayyip Erdogan ee Belgrade oo ay wehliyaan AK Party. dhismaha Mustafa Esgin ee Turkey ayaa u qaadan in Belgrade-Sarajevo Highway Wasiirka Gaadiidka Cahit Turhan xaflad groundbreaking furay joojiyo oo jilicsan.
Faragalinta Wasiirka kadib, wuxuu ka warbixiyay horumarka:
"Dib u dhac badan kama dhici doono, xaraashka la kansalayna waxaa la qaban doonaa bisha soo socota."
2 oo loogu talagalay tareenka Bursa ayaa leh goob shaqo
Xaqiiqdii, Kharashaadka ku baxa Bursa ee loogu talagalay tareenka Bursa, oo magaciisu dib loo eegay sida Tareenka Sare ee barnaamijka maalgashiga, ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday xaaladda ganacsiga.
Barnaamijka, 2019 kaliya 252 bilyan 10 milyan oo ginni ayaa la arkaa, xaaladdani waxay ka tarjumaysaa goobta dhismaha.
Muddo dheer, waxaa jiray shiddo la taaban karo oo keliya oo ka socda Demirtaş Viaduct iyo nawaaxiga Kazıklı ee Ring Road. Wuxuu la socdaa shaqaalaha 4 sidoo kale wuu shaqeynayaa. (dhacdo - Ahmet Emin Yılmaz)
Saxiixyada Tiknoolajiyada Tiknoolajiyada Sare ee Yurub 11 / 06 / 2019 Saxiixyada Tikidhada Tiknoolajiyada Sare ee Yurub: M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Halkalı- Awoodda qaadista dhererka Wadykule Tareenka, Çerkezköy- Qalabaynta ayaa si wayn u kordhi doona dhismaha qaybta, Midowga Yurub (EU) ee dhismaha mashruuca waxaa loo isticmaali doonaa 275 million euros dhamaystirka mashruuca ayaa sheegay in xiriirka xadiidka sare ee waddamada Yurub la gaari doono. Wasiirka Turhan, HalkalıMashruuca Tareenka Tareenka ÇerkezköyMunaasabaddan oo ay ka soo qaybgaleen xafladii dhismaha ee dhismaha Kapıkule Qeybta, wuxuu sheegay in farxad ah in mid kale lagu daro mashaariicda waaweyn sida Madaarka Istanbul, Marmaray Tube Crossing, Yavuz Sultan Selim Bridge, Waqooyiga Marmara Jidka iyo Tareenka Eurasia.
Madaxweyne Altunar oo Noqon Doonin Gaadiidka Xawaaraha Sare 12 / 03 / 2013 Madaxwayne Altunway oo aan Tareenka Tareenka aheyn Si aan u Taabaneyno Tareenka Waxaan Soo saarnaa Duqa Magaalada Bursa Recep ALTEPE, Konya way iman kartaa oo kuu sheegi kartaa barnaamijkaaga ... Tareen, Metro, Tareenka Soomaliya Waxaan Soo saarnay. Labada Bursa iyo dalkayagu waxay hadda soo saari karaan wax walba oo laga soo bilaabo warshadaha iyo warshadaha. Waddankeenu waxa uu leeyahay hadafyo, sidaas awgeed waa in aan dawladaha hoose iyo dawladaha hoose ka dhigi karnaa horumar. Waxaan u sheegnay inta lagu jiro xilliga doorashadu anagu waan qabanay. Duqa magaaladda caasimadda ayaa booqday Duqa Magaalada caasimadda ah ee Tehir Bey. Gaadiidka gudaha ee ugu horreeya, oo ay ku jiraan barnaamijka, waa dhamaystiran yahay. Waxa uu helay shahaadadiisa bishii hore oo imika geli kara hindise. Dhismaha warshadeynta wuxuu leeyahay qaybta R & D. Mashiinka Mashiinka
Wadooyinka waawayn ee Shiinaha iyo gawaarida xawaaraha sare leh ayaa kor u kacaya 07 / 11 / 2017 Inkastoo Shiinuhu uu ku jiro habka isbeddelka dhismaha ee loogu talagalay kobaca tayada leh, waxa si degdeg ah loogu casriyeynayaa kaabayaasha gaadiidka ee dalka. Lafaha ugu weyn ee geedi socodkan casriyeynta waa jidadka cusub iyo xawaaraha sare. Shiinaha ayaa dhisay in ka badan hal kun oo buundo 800 iyo in ka badan hal kun oo kilomitir oo tareeno xawaalad sare ah, 10 ayaa sidaas yidhi, sida ay sheegtay saraakiisha gaadiidka ee dawladda on Sunday. Waxa uu sheegay in gobolka Hubei Shiinaha ayaa ka hadlay ah caasimada buundada caalamiga ah ee carwada lagu qabtay Wuhan, Zhou Wei, Engineer Chief of wasaaradda gaadiidka dhamaadka 2016 sano in ay jirto 805 300 kun buundooyinka guud ahaan Shiinaha. Sida laga soo xigtay Jou, dharka 10 ee ugu dheer dunida aduunka ılı
Tareenka xawaaraha sare ee Trabzon ma aha tareenka xawaare sare 26 / 03 / 2016 Trabzon: Guddoomiyaha Gobolka Trabzon Gobolka Heydar Revi, Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaarsiinta ayaa la kulmay Binali Yildirim. Revi, Trabzon, dhammaan mashaariicda la xidhiidha waddooyinka, Wasiirka ayaa codsaday oo u sheegay. Guddoomiyaha Goboleedka Xisbiga ee Ak Part Trabzon Haydar Revi, Ankara, ayaa booqasho dhowr ah ku maraya mas'uuliyiinta awoodda leh mashaariicda muhiim u ah Trabzon. Mid ka mid ah kulamadan ayaa la qaatay Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta Binali Yildirim. Revi ayaa yiri, iyada waxaan la kulannay Wasiirada Binali Yıldırım. Kulankan waxaa ku weheliyay Xildhibaanno, Duqa Magaalada caasimadda iyo Guddoomiyaha Gobolka Imiz
Xaraashka tareenka xawaaraha sare leh | Ankara-Konya Line-Speed ​​Train Line (6) tareen aad u sarreeya oo tareen qandaraasle ah 16 / 11 / 2012 Aad-xawaaraha sare curdan tareen: Ankara-Konya High Speed ​​Railway Line si 6 Total aad u-xawaaraha sare ee iibka set tareenka ee gundhigga, oo ay ku jirto shirkadda 4 bixin, halka Shiinaha shirkadda yimid CNR ah dalab ugu hooseeya 263 million 510 kun 757 sameeyo. The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) General Directorate, tareenka Xawaaraha Sare Ankara-Konya (YHT) si ay u daboolaan baahida sii kordhaysa ee line iyo si tiro 6 in la kordhiyo tirada duulimaadyada in aad u-xawaaraha sare ee iibka set tareenka ee gundhigga, oo ay ku jirto shirkadda 4 ku bixisaan, halka ka ugu hooseeya shirkadda Chinese in ay bixiyaan 263 510 kun oo milyan oo ka CNR 757 yimid sameeyo. TCDD Ankara-Konya ...
Wadooyinka waawayn ee Shiinaha iyo gawaarida xawaaraha sare leh ayaa kor u kacaya
Tareenka xawaaraha sare ee Trabzon ma aha tareenka xawaare sare
Xaraashka tareenka xawaaraha sare leh | Ankara-Konya Line-Speed ​​Train Line (6) tareen aad u sarreeya oo tareen qandaraasle ah
Xawaaraha sare ee Bursa
Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu ku dhamaanayaa Bartilmaameedkii Bursa
Mana ahan jimce, Menderes
Buuxinta dabaqa ayaan lahayn xaddiga 3